UBO waa uun Azaan, Ethiopia ogg Midaa, Raaskamboon orodkiisa iyo Kenya oo aga joogta iyo In Kaloon la Ogayn Ugu Dambayn Arinkaa Waamo ayaa ku adkaan? – Rasaasa News
Baadi doonku waa in uu yaqaan sumada xoolaha baadida ah ee uu doonay si uu uga garto xoolaha kale. Sanooyin ka hore kolkii ay hogaaminta ONLF, isku qabteen hanaanka siyaasadeed ururka, waxa ka dhex bilowday ururka looltan iyo xulafaysi ka dhex abuurmay beesha ay ku abtirsato ONLF.
Khilaafka ugu weyn ee xubnaha hogaaminta ONLF, iska hor keenay wuxuu ahaa hal arin, oo markii dambe laga dhigay in ay tahay sharciyad ururka iyo isbadal doon hogaamiye. Laakiin runtu waxay ahayd siyaasada ururka oo dib ugu laabatay Somaliya, intii ay awooda saari lahayd Ethiopia.
Khilaafku wuxuu bilowday, kolkii uu Jwxo-shiil, xidhiidh sokeeye la yeeshay Cabdulahi Yuusuf sanadkii 2002 oo markaas ahaa hogaamiye kooxeed, arinkaas oo ay aad uga xumaadeen qaar ka mid ah xubnihii hogaaminta oo dhab u aaminsanaa mabda,a ONLF. Xubnahaasi waxay diidanaayeen in ONLF ku dhex milanto khilaafka Somaliya oo ay u arkayeen in Jabhaduy ka xorowday.
Waxaa soo baxaday labo aragtiyood oo uu Jwxo-shiil, meesha soo dhigay, oo sida la sheego uu kala soo tashaday masuuliyiin Ogaden ah, oo hore madax uga soo noqday dalka Somaliya, kuwaas oo la isku xansaday aragti hore oo odhanaysa “waan qaybsanahye kolka hore ma ‘waamo’ ayaa la xorayn mise ‘Ogaden’.
Aragtidaas Jwxo-shiil, wuu kala cabsaday in uu dhex dhigo xubnaha ururkii ONLF, laakiin wuxuu bilaabay in uu uruuriyo odayaal beesha ah oo aaminsan in Waamo iyo Ogaden ay isku mid yihiin, lana hor mariyo Waamo. Arintaasi waxay meesha ka saartay magaca Jabhada wadaniga Xoraynta Ogaden [waxayna noqotay Jabhada xoraynta wadamada Ogadeen (Jxwo)].
“Ogadenia waa xabad Rooti ah “sanwitch” oo u dhaxaysa Somaliya iyo Ethiopia, mid walibana in uu cuno doonayo” Dr. Dolal July 1994 Melbourne Australia.
Si olole ah waxaa Jabhada taageeray dad badan oo odayaal ah oo hore uga soo horjeeday oo ONLF. Dabadeena, waxaa balaadhay goobaha lagu qabto shirarka ONLF, dad badan waxay aamineen in Jwxo-shiil, yahay nin wanaagsan oo ONLF, kor u qaadaya kasbana kara dad badan. Laakiin xubno yar ayaa arkayey qalooca socda iyo olole aan meel u socda.
Odayaasha ku soo biiray taageerada ONLF, ee hore uga horjeeday waxaa ka mid ahaa Professor Maxamed Cabdi Gaandi, Duuliye sare Cabdifataax Jaamac Caamir, Wasiir hore Faarax Afey, wslf xubin hore Duraan Axmed Xaashi, G/sare Yuusuf Maxamed Sugaal, G/sare Cali Gurxan iyo Eebe ha u naxariistee Maxamuud Tarax.
Xubnaha ONLF ee fahmay halka Jwxo-shiil wax u wado, waxay sugayeen inta laga gaadhayo shirkii xulashada hogaanka ururka ONLF, kaas oo 4-tii sanaba mar la qabto, waxay doonayeen in ay hogaanka ku waydaariyaan shirka ugu horeeya. Jwxo-shiil, arinkaas wuu fahmay, wuxuuna diiday in uu shirba dhaco, kolkba wax uu sheegaba.
Dabayaaqadii sanadkii 2008, waxaa ku furmay Jwxo-shiil, mucaaradad xoog leh oo uusan marna joojiyeen geeri la,aanteed. Laakiin Jwxo-shiil, wuu ka hortagay wuxuuna ku guulaystay in uu god galiyo kuwii ka soo horjeeday.
Dagaalkii Cali-buulay ee degmada Dhoobley
Muddo ka dib Jwxo-shiil, ma uusan qarsan wuxuuna dagaal ka riday Cali-buulay oo ka tirsan degmada Dhoobley ee gabalka Jubada hoose. Waxaana si cad u soo baxday in ONLF ay UBO noqotay oo ay meel walba ku dhimato mabda,a la,aan.
Ururka Al shabaab ee haysta Jubada hoose, oo aan siyaasad ahaan aad u necbayn kooxda Jwxo-shiil, ayaa ka shakiyey in kooxdu ay la mid noqoto dagaal oogayaashii Somaliya maadaama uu Janan Somaliyeed wato.
Waxaa kale oo siyaasadii Jwxo-shiil, mudhxiyey dadweynaha u dhashay gabalka Ogaden, oo gidigood fahmay ujeedada kooxda Jwxo-shiil. Wuxuuna arkay isaga oo meel cidla ah ka taagan arimaha siyaasada ee UBO ee ku aadan gabalka Ogaden iyo gayiga Somaliya.
Jubooyinka waxaa markiiba la sameeyey ururo isku xidhan oo ah lidka kooxda Jwxo-shiil, balse doonaya in degaanadooda ay ka saaraan ururka Al shabaab.
Jwaxo-shiil, wuxuu ku guul daraystay in uu cagaha dhigto Somaliya iyo Jubooyinka. Waxaana la gudboonaatay in mar kale uu rogo falaga, waxaana u soo baxay abaabul luunjeex ah ‘Aazaaniya’, isaga oo boodhka ka afuufay taageerayaashii baalidka ahaa.
Jwxo-shiil, wuxuu dan mooday dawlad gabaleed iyo xirfadaha maanta Somaliya ka jira, dhamaan xubnihii aan muuqan ee kooxda, Jwxo-shiil wuxuu u isu dabo taagay dawlad gableed loo higaadiyo AaZaaniya.
Hogaamiyaha kooxda Aazaaniya waa Maxamed Gandi, oo hore u noqday wasiirka gaashaandhiga ee Somaliya, ahana dadka ay Jwxo-shiil, yihiin isku fikirka aamisan in Jubooyinku yihiin halkii laga xorayn lahaa gabalka Ogaden.
Shacbiyada taageerta maamulka Aazaaniya iyo midka Kooxda Jwxo-shiil ee UBO, waa isku mid. Walow ay jiraan dad aan jeclayn kooxda Jwxo-shiil, oo Ethiopia ku xidhan, hadana si shakhsi ku taageera madaxa maamulka Aazaaniya.
Raaskamboni, oo uu hogaamiyo Axmed Madobe, waa faladh ka mid ah burburkii Maxkamadaha Islamka Somaliya lana garab ah dawlada ka soo jeeda maxkamada Islamka ee Sheekh Shariif hogaamiyo.
Axmed Madoobe, wasiir dawlada Sheekh Shariif, wuxuu ka doorbiday ka saarida Al shabaab degaanka uu ku abtirsado iyo dib u habaynta bulshada kala daadsan ee degaanka Jubooyinka. Mudo dheerna waxaa uu ahaa hogaamiye dagaal oo ay aaminsan yihiin dadweynaha Jubooyinku.
Waxaa ka daba qaatay oo ku haysta Axmed Madoobe hogaanka Jubooyinka madax kooxda AaZaaniya Maxamed Gandi oo dhamaan xubnaha golihiisu yihiin ururka UBO, ee gadhwadeenka ka yahay Jwxo-shiil.
Kooxda Raaskambonka waxaa taageera dad ka soo jeeda Jubooyinka iyo qaar lid ku ah kooxda Jwxo-shiil.
Ethiopia Arimaha Way Ogtahay.
Inkasta oo maamulka Aazaaniya, ay taageertay dawlada Kenya iyo dad dhalasho Ogaden ah oo aan aad ula socon micnaha Aazaaniya. Laakiin Ethiopia oo lug weyn ku leh Somaliya ma aaminsana in uu daahir yahay maamulka Aazaaniya, si dhab ahana way ula socotaa xaqiiqada.
Waa la isku dayey in lagga gado Gandi Ethiopia, waxaana labo goor la sheegay in uu Ethiopia tagay, laakiin arinkaas waxba kama jirin. Gandi oo Ethiopia taga waxay ka dhigan tahay Jwxo-shiil, oo Addis Ababa taga, laakiin waa suurto gal in uu tago, hadii uu hirgalo heshiiska nabadeed ee la sheegay in kooxda Jwxo-shiil ay la galayso Ethiopia.
Hubaal hoos guurka hanaanka UBO ee AaZaaniya waxaa laga dheehan karaa labo shir oo dhawaan ka dhacay London dalka Ingriiska. Shirarkaas oo ay qabteen labo Jaaliyadood oo isku beel ah, laakiin la kala safan Aazaaniya iyo Raaskaambooni.
Waxaa intaas dheer in labada kooxoodba way taageersan yihiin hawlaha milatari ee Kenya ka wado degaanada Jobooyinka ama Waamo.
Kenya Maxay Samayn kolka ay Shaqada dhamayso?
Kenya in ay gasho Somaliya waxaa ka dambeeya dalalka galbeedka, oo iyaga laftigoodu ciidamo keeni doona Somalia marka Afrika shaqada qabato. Galbeedku waxay waardiye ka hayaan Isbalaadhinta Shiinaha iyo shidaalka geeska Afrika.
Kenya waxay sheegtay in marka ay shaqada dhamayso ay ka baxayso Somaliya, arinkaas lama hubo waxaana nagayn doona Kenya xooggaga ay isku garab wado.
Shakin kuma jiro in marka Al shabaab meesha laga saaro in Kenya ay kala guri doonto culays ayna qaydhiinka ku qaybin oo ay dhawaan la wadaagi doonaan dawlada Somaliya iyo Ethiopia, taas oo fursad u siin doonta Kenya joogitaanka Jubooyinka.
Dheeho Sawirada labada kooxood ee Aazaaniya iyo Raaskaambooni.